Dargaggoon Birrii Kuma 40 fi meeshaalee biroo Baajaajiisaa keessatti arge abbaa maallaqaaf deebise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Dargaggoon Birrii Kuma 40 fi meeshaalee biroo Baajaajiisaa keessatti arge abbaa maallaqaaf deebise
On Nov 9, 2021 138
Finfinnee, Onkololeessa 30, 2014 (FBC)- Magaalaa Cirootti dargaggoon Birrii Kuma 40 dabalatee meeshaalee biroo Baajaajiisaa keessatti arge abbaa maallaqaa iyyaafachuun deebisuufii ibsameera.
Dargaggoo Shamsuu Mahammad jiraataa Magaalaa Ciroo konkolaachisaa baajaajii yoo ta’u, bajaajiisaa keessatti borsaa Birrii kuma 40 fi bilbila lama baatu akkasumas meeshaalee biroo borsaa waliin jiru abba qabeenya iyyaafachuun gara Waajjira Poolisii Magaalaa Cirootti fiduun kennuufii eerameera.
Dargaggoon kun haqa nama kan hin barbaadne,haqni nama miidhaa malee bu’aa kan hin qabu ta’uu ibseera.
qonnaan bulaa Godina Harargee Lixaa Aanaa Gubbaa Qorichaati,
Mucaa jalaa dhukkubee yaalchisuuf osoon deemaa jiranuu borsaa uffataa xiqqaa keessatti Birrii kuma 40 fi bilbila dabalatee,meeshaalee biroo baajaajii keessatti irraanfatanii bu’uu ibsaniiru abbaan qabeenyichaa Obbo Kaasayee Dabbaqaa.
Maallaqni ilma nama ni soba ni gowwoomsaas garuu,dargaggoon kun kanaaf osoo hin jilbiifatiin mallaqaa kana iyyaafate naaf deebisuu isaatiif goota haqaati jechuun dargaggoo kana gochaa isaatiif galateeffataniiru.
Dargaggoo Shamsuun hojii kana hojjechuu isaatiin , nama haqaatii fi fakeenya dargaggoo hundaati, dargaggoonni haqummaa irraa barachuu akka qaban Itti gaafatamaan Waajjira Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Ciroo Inispeektar Mikaa’eel Daanyee ibsaniiru.
Dargaggoonni akka isaatii bakka hundaati yeroo mara qaamolee nageenya waliin dhimmoota akkanaa fi kan biroo irratti haqa eeguufi olaantummaa seera kabachiisuu keessatti qooda isaanii bahachuu akka qaban ibsuu isaanii OBN gabaaseera.
Dargaggoo sibiloota hojiin ala ta’aaniirraa meeshaa waraanaa rasaasa 40 fudhatu…
Dargaggoo sibiloota hojiin ala ta’aaniirraa meeshaa waraanaa…